Omah Lay akpọrọ Apple Music's Africa Rising Artis - The Nigerian News &
Rave News Digest: Omah Lay Akpọrọ Apple Music's Africa Rising Artist, Di na Nwunye Onye Pụtara egbe Na Black Charged, Leroy Sane + More
Emelitere! SRzọ SR-nwapụtara Odị Orange Dị Ka A Star Star | #SRCOTD
Omah Lay kpọrọ aha ihu Apple Music Africa Rising, di na nwunye ọcha gbara otu egbe na nne ojii eboro ebubo, Leroy Sane dechara ịga Bayern Munich. Nọgidenụ mara na Rave News Digest nke na-achịkọta akụkọ ise kachasị ewu ewu ịchọrọ ịchụkwudo, na-azọpụta gị oge na ume. Tụlee ya na akụkọ ụbọchị gị.
1. Omah Lay kpọrọ aha mmeghe nke mmemme omenka 'Africa Rising' nke Apple Music gosipụtara
Taa, Apple Music kwupụtara 'Africa Rising,' ihe mmemme egwu ọhụụ na-eme kwa ọnwa na ndepụta onye otu chọrọ ụzọ ịchọpụta, igosi, ma bulie talent ndị Africa elu. Onye Naijiria mụrụ, onye ọbụ abụ Afro-fusion, na onye na-ede abụ Omah Lay ga - abụ onye na - ahụ maka mpụta mbụ maka mmemme Apple Music ọhụrụ.
Kwa ọnwa abụọ, Africa Rising ga-egosipụta onye ihe nkiri dịka Omah Lay, ndị otu nchịkọta akụkọ nke Apple Music họpụtara na kọntinenti ahụ wee jiri ike zuru oke nke ikpo okwu ahụ mee ka ha nwekwuo mmasị na ndị na-ahụ maka egwu na Africa na gburugburu ụwa.
Ihe omume a tinyekwara ndi nlere anya gosiputara Africa Rising mkpuchi kpakpando gbakwunyere otutu ndi nka ohuru ohuru na ndi n’aru ndi n’ile n’agba ndi ozo.
2. Ndebanye aha ndị na-eme ntuli aka: EC na-ewebata chie maka njikwa kwụ n'ahịrị na Ghana
N'ime usoro ọhụrụ ahụ, ndị isi kompeni ahụ na-enye ndị na-edebanye aha ozi ọnụọgụ ole achọrọ ịbanye na ngalaba ebe idebanye aha maka ụbọchị ọ bụla iji debanye aha ha.
Kọmịshịkị Mịko nke Ghana (EC) ewebatala usoro njikwa kwụ n'ahịrị iji belata ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-edebanye aha na-atụba ogige ebe idebanye aha maka kaadị vidiyo.
Onye ntụzi aka nke ọrụ nhọpụta na EC, Dr. Serebour Quarcoo, onye mere ka mgbasa ozi mara nke a ụnyaahụ, kwuru na atụmatụ a ga-ebelata ọnụ ọgụgụ ahụ n'ụlọ ọrụ ndebanye ma nyere aka melite na usoro ọgbaghara mmadụ na-akpaghasị mmekọrịta.
3. South Africa: Gọọmentị gbara ndị mmadụ ume ịtụle mkpochapụ ụlọ akwụkwọ
Ndị nne na nna na-akpọ maka mkpochapụ ụlọ akwụkwọ, na-aga n'ihu na-arịwanye elu nke ọrịa COVID-19 na mba ahụ. South Africa nwere ọnụ ọgụgụ ikpe 168,061 enyocha coronavirus, na mmadụ 2,844 nwụrụ ọnwụ.
Ọnụọgụ ndị a gụnyere ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ, ndị laghachiri ụlọ akwụkwọ dịka mba ahụ batara na mkpọchi Alert Level 3 na mbido June. #SaveOurChildren, otu ndi nne na nna na ndi ha na ha jikporo oku, akpọkuola Ngalaba Na-ahu maka Mbido Elu Ala ka ha laghachi na mmechi kpam kpam.
Di na nwunye ndi tiri egbe na nne ojii na ndi ebo ebubo ebubo mmebi iwu
Jillian Wuestenberg, 32, na Eric Wuestenberg, 42, nwere ezinụlọ na esemokwu esemokwu na mpụga Chipotle na Michigan.
E jidere otu di na nwunye ọcha si Clarkston, Michigan ma bo ya ebubo mmebi iwu mgbe vidiyo vidiyo gosiri nwanyị ahụ na-atụ egbe na nne ojii na ụmụ ya nwanyị abụọ. Jillian Wuestenberg, 32, na Eric Wuestenberg, 42, ka ejidere ya na Wednesde, n'otu ụbọchị ahụ ha na ezinụlọ ahụ nwere esemokwu na Chipotle na Orion Township.
Ọfịs Oakland County nke ndị ọka ikpe mara ọkwa na Thursday na ebubo ebubo Wuestenbergs na ebubo ọjọọ. Akpọtara ndị nnọchite anya Chipotle n'ihe dị ka elekere isii nke abalị mpaghara banyere akụkọ banyere iyi egwu, Office nke Oakland County Sheriff kwuru na nkwupụta akụkọ. Ma Wuestenbergs na ezinụlọ ahụ, ndị ndị ọchịchị na-amabeghị, akpọọ ndị uwe ojii na ibe ha.
5. Leroy Sane gụchara Bayern Munich si Manchester City pụọ
Naanị otu Premier Premier Leroy Sane pụtara oge a bịara na mmeri City meriri Burnley n'oge na-adịbeghị anya
Leroy Sane kwuru na Bayern Munich bụ nnukwu klọọkụ nwere nnukwu ihe mgbaru ọsọ mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta afọ ise na Bundesliga. Onye ọkpụkpọ German ahụ, 24, esonyela na Manchester City maka ego mbido nke ruru £ 44.7m nke nwere ike iru £ 54.8m.
Sane sonyeere City site na Schalke na 2016 maka £ 37m wee nweta ọkpụkpọ abụọ Premier League, FA Cup na iko abụọ.
"Achọrọ m ka anyị merie ọtụtụ bọọlụ dịka o kwere mee, na Champions League bụ ihe kachasị mkpa," o kwuru.
Yemi Alade bụrụ abụ banyere Boyz, Mr Eazi Serenades Onye hụrụ ya n'anya + More Music-African Music
Radị Rave July 3, 2020